Shiinaha Torsional xiiritaanka birta qaab-dhismeedka birta soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Tailian Fastener
Qalabka birta ah ee birta waa nooc ka mid ah xooga sare iyo nooc ka mid ah heerka caadiga ah. Qalabka birta birta waxaa badanaa loo isticmaalaa injineernimada qaabdhismeedka birta si loogu xiro dhibcaha isku xirnaanta taarikada qaabeynta birta. Qalabka birta ah ee birta loo qaybiyay waxay u kala qaybsan yihiin noocyo xiirid ah oo torsional ah iyo handarraabbadeedii xoogga weynaa ee laba geesoodka ahaa. Handarraabbadeedii xoogga weynaa ee laba geesoodlaha ahaa waxay ka tirsan yihiin darajada sare ee boolal wadaagga ah, halka noocyada goos gooska ee aalladda xoogga sare ay yihiin hagaajinta handarraabbadeedii xoogga weynaa ee laba geesoodka ahaa. Dhismaha sifiican, dhismaha biraha qaabdhismeedka biraha waa in la adkeeyo marka hore kadibna ugu dambeyn. Markii ugu horreysay ee la adkeeyo birta qaabdhismeedka birta, nooca waxyeellada ka timaadda qulqulatooyinka korantada ama tiirarka korantada lagu hagaajin karo ayaa loo baahan yahay. Xayiraadda ugu dambeysa ee handarraabbadeedii birta ayaa leh shuruudo adag. Adkaynta ugu dambeysa ee biraha qaabdhismeedka birta birta ah ee torsional alwaaxda waa inay isticmaalaan nabarrada korantada ee nooca torsional jeexitaanka, iyo adkeynta ugu dambeysa ee silsiladda nooca birta ah waa inay isticmaalaan bareegga korantada. Nooca torsional xiirida birta qaabdhismeedka boolku wuxuu ka kooban yahay bool, lowska, nooca bir xiirashada ee torsional xoog birta birta qaabdhismeedka birta weyn ee laba geesoodka ah iyo dhaqe.
Hore: Qod silig dabada ka qoda
Xiga: Alaab-qeybiye la isku halleyn karo oo lagu sameeyay Shiinaha dhejiyeyaasha U Bolt Bolt iyo Nut T Head Bolt Flange Bolt Anchor Bolt U-Bolt Qaadista Eye Bolt Allen Bolt Stud Bolt oo leh Hex Nuts iyo Flat Washer
Qalabka xarkaha ee Torsional